Please.....I'd like to use networking Java (NokiaC2-03)??? - MYSTERY ZILLION
Please.....I'd like to use networking Java (NokiaC2-03)???
August 2012 edited August 2012 in Java
How to use NokiaC2(Java) networking, please?
Any problem , that contact my operator if the problem persists.(006),What means???
Please, request to explain by myanmar fonts.thank you so much for all ...
သူငယ်ချင်းမေးချင်တာက Internet သုံးတာကိုပြောတာနဲ ့တူတယ် Nokia C-2 က 2G network ကိုပဲ Support လုပ်တယ်ပြောတယ် ။ Phone ပေါ်ကနေ တုက်ရိုက်သူံးလို ့မရဘူး Modem အနေ နဲ ့လဲသုံးလို ့အဆင်မပြေဘူးနဲ ့တူတယ် ။သိပ်တော ့အသေအချာကြီးမဟုတ်ပါဘူး။
c2 တွေက များသောအားဖြင့် network ပိုင်းကြောင်တာများတယ်။ network operator ကိုတွေ့တယ် တခါတလေ connect လုပ်လို့မရတာမျိုး တွေဖြစ်တတ်တယ်။
board က phone network လဲပီးစမ်းကြည့်ရင်ရသွားတာများတယ်။ ဒါပေမယ့် c2 အတွက် ပစ္စည်းရှားတတ်တယ်။